ဗစ်တာ Pellet စက်အကြောင်းကို | ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ကျနော်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စေ့စပ်ပါပြီ အစာကျွေးခြင်း granulator ကျော် 15 နှစ်ပေါင်း. Zhengzhou ဗစ်တာစက်ယန္တရား; Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိစက်ယန္တရားမြို့၏နာမည်ကောင်းရှိသောရှေးဟောင်း Zhengzhou မြို့တွင်တည်ရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရိစ္ဆာန်အစာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းတွင်အထူးပြုလုပ်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်များမှာသေတ္တာပြားဖြစ်သည် လုံးလေးများစက် ကျယ်ပြန့်သေးငယ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်,အလယ်အလတ်ကြက်မွေးမြူရေးခြံနှင့်ပေါ့ပါးသောစက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အိမ်အသုံးပြုရန်. ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော granulator သာထုတ်လုပ်သလဲ? အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာကိုလေ့လာပါ။ သေတ္တာသေတ္တာစက်အကြောင်းသင်သိပါလိမ့်မည်!
Victor Pellet Mill သည်စက်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုအရေးအပါဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဤသဘောသဘာဝကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိရန်မြှုပ်နှံထားပြီးသော်. ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်နှစ်ချောင်းပေးကြသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းမှစတင်သည်, ထို့နောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တိုင်းကိုအရည်အသွေးမြင့်အင်ဂျင်နီယာများကတင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးသည်. ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်.
◆စက် & အစိတ်အပိုင်းများကိုကြာရှည်ခံ
◆ဝတ်ဆင် & မျက်ရည်အချိုးအစား
1.ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကုန်ပစ္စည်းများအပြင် ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများကိုလည်းရှာဖွေသည်. ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းမပြုမီနှင့်အပြီးတွင်ဘက်စုံထောင့်စုံတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့သည်.
2. စက်များသည်သင့်ထံအပ်နှံပြီးနောက် - ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်သင်ထံရောက်ရှိပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပံ့ပိုးမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိသည်.
3.ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုကုန်ပစ္စည်းတိုင်းအတွက်အချိန်ပေးခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားသည်. ဒီတော့, ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းတိုင်း၏အဓိကတာ ၀ န်ဖြစ်သည်.
granulator စက်မော်ဒယ်များအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့. ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်သည်.